- भोजराज घिमिरे
‘यसरी काम कच्चा गरेर किन सताउनुहुन्छ गरिबलाई ? बरु कामै नगरिदिएको भए हुन्थ्यो नि मालिक !’ भन्दै पीडा भरिएको स्वरमा विष्णु पुजनले आफ्नै भाषा मैथिलीमा चिच्याएर ढोकाबाटै कराउँदा कुरा नबुझेकाले विसनकुमार अक्क न बक्क पर्‍यो ।
‘हन के भन्छन् यी मान्छे ? मैले त बुझिनँ । के भो ? यिनको के काम मैले बिगारिदिएछु हँ विजयबाबु ?’, विसनकुमारले अध्ययन गर्न सुरू गरेको जग्गाको दाखिल खारिजको कागजातलाई एकातिर पन्छाएर उसको छेउमै बसेर अर्को फाइल केलाउँदै गरेको माल अड्डाका पुराना ख’र सा’बलाई सोध्यो । विष्णु पुजनका कुरा विजय बाबुले अनुवाद गरेपछि विसनकुमारले साँच्चिकै खिन्नता अनभूत गर्‍यो ।
को मान्छे हुन् ? कुन फाइलको कुरा गर्दै छन् ? अनुमान गर्दै सयौँ फाइल दिनभरिमा हेरेको विसनकुमारले जति नै सम्झिने प्रयत्न गरे पनि सकेन । ‘अप्ठ्यारा फाइल आज झन् धेरै सकेको छु, त्यसैमा पो पर्‍यो कि क्या हो ?’ भन्ने सोच्दा भने उसको ध्यान हेरिसकेका फाइलतिर खिचिएर गयो ।
त्यस अड्डामा कार्यबोझ त्यति धेरै थियो कि गलत मनसाय नै नराख्दा पनि गल्ती हुने सम्भावना प्रचुर मात्रामा नै रहन्थ्यो । नबुझिने स्थानीय भाषा र बोली, हरहमेसाको भीडभाड, जग्गा दलालको जगजगी, स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता र नेताहरूको दबदबाका बीचमा पनि सेवाग्राहीको काम समयमै तमेली गर्ने कोसिसमा हुन्थ्यो विसनकुमार । तर त्यसो गर्न सकिरहेको भने थिएन ।
उसको एकल प्रयासले मात्रै के हुनु ? प्रयास त गर्थ्याे तर स्रोत र साधन कमी अनि सहयोगी हातहरूको नियत देख्दा दिक्क हुन्थ्यो । अड्डाका सहयोगी जमिन छाड्न नमान्ने, ऊ भने एक्लै उफ्रिन खोज्ने । त्यसरी उफ्रिन खोज्दा कति हात पो उफ्रिन सक्थ्यो ? सोचअनुसार अड्डा चलिरहेको थिएन । त्यही भएर त्यो माल अड्डामा सरेर आएपछि सधैँ तनावमै रहेर काम गर्दै थियो विसनकुमार ।
कार्यालय प्रमुख हो । अड्डामा सुशासन कायम गर्दै सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट पार्ने प्रमुख जिम्मेवारी उसकै हो । जति नै तनावमा भए तापनि जिम्मेवारीबाट उम्किन नमिल्ने, समस्याको समाधान गर्नै पर्ने । आजका लागि पन्छाई हेरे पनि भोलि त्यही झमेलाको सामना गर्नै पर्ने । त्यही भएर विसनकुमारले पन्छाउँछु भन्दा पनि धरै पाउँदैनथ्यो ।
मनको सोझो, दिलको सफा विसनकुमार । सेवाग्राहीले आफ्ना कारणले सास्ती र हैरानी पाउनुहुँदैन भन्थ्यो । मातहतका कर्मचारीहरूलाई त्यसरी नै प्रशिक्षित गर्न खोज्थ्यो । हलो अड्काएर गोरू चुट्ने आदत लागिसकेको थियो त्यहाँका धेरै कर्मचारीमा । त्यसैले कहाँ सबैले भनेको सुन्थे, मान्थे र गर्थे ? धेरैले विसनकुमारका कुरा रुचाएनन् ।
त्यस अड्डामा ऊ सरूवा भएर काम गर्न थालेपछि त्यहाँ हैकम चलाएर बसेका निकै जना पुराना कर्मचारी अन्यत्रै सरूवा मागेर गएका थिए । रिक्त स्थानमा पदस्थापन भएका पनि आई नसकेकाले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न चर्को परेको हुँदो हो । थोरै कर्मचारी, कार्यबोझ बढी । त्यस्तो स्थितिमा कार्यबोझको दबाब त पर्ने नै भयो । त्यस्तो दबाबका बीचमा गरिएका काममा ‘मैले भूल गरेको छैन’ भनिहाल्ने स्थितिमा थिएन विसनकुमार ।
पहिला पनि अलिअलि भूल भएकै हुन् । पछि थाहा हुनासाथ सच्याइएको पनि हो ।
निर्णय त कागजातको गहिरो अध्ययनपछि मात्र दिने गर्थ्याे ऊ । त्यसैले निर्णयमा अलिकति समय बढी लाग्थ्यो । त्यही भएर त होला सायद त्यसका कलमबाट ज्यादै कम मात्रै भूल हुने गरेको । अगाडि जति फाइलमा भूल भएका थिए, ती सबै तल्लो दर्जाका कर्मचारीको असावधानीले भएका थिए ।
भूल हुँदाका बखत सेवाग्राहीले समयमै गरेका उजुरीमा पनि सच्याइदिने प्रस्ताव भने एक–दुई दिनपछि मात्रै विसनकुमार समक्ष पेस हुन्थ्यो । जति ढिलो भए तापनि भूल भएको भेटियो भने सच्याउन भने ऊ गाह्रो मान्दैनथ्यो । तर त्यस दिन भनिएको भूल त्यस्तो प्रकृतिको थिएन ।
भूल जुन दिनमा भयो भनिएको थियो, उजुरी पनि सेवाग्राही आफैँले उपस्थित भएर उसै दिन अड्डा प्रमुखका अगाडि गरेको थियो । अझ त्यसमा पनि हाकिमबाटै भूल गरियो भन्ने गुनासोको स्थिति थियो ।
त्यसैले तुरुन्तै समस्या समाधान गर्नुपर्छ र त्यसको जिम्मेवारी आफैँले लिनुपर्छ भन्ने ठान्दै विष्णु पुजनको हातबाट फाइल लिएर आफैँले अध्ययन गर्न थाल्यो विसनकुमारले । फाइल हेर्नासाथै आफूबाट कुनै गल्ती भएको छैन भन्ने यकिन पनि गरिहाल्यो उसले ।
मालपोत अधिकृतको राय र सुब्बा सा’बले पेस गरेको कागजात तथा कानुनी बन्दोबस्तको गहिरो अध्ययनपछि सम्पूर्ण अङ्ग पुगेको देखिएकैले कानुनबमोजिम नै विष्णु पुजनको नाममा स्वामित्व कायम भएको, मालपोत र अन्य दस्तुर पनि त्यसैले तिर्दै आएको तर भोगचलन भने कहिल्यै गर्न नपाएको जग्गामाथिको ‘स्वामित्व–छोड’को कागजातमा निर्णय लिएको थियो ।
तैपनि फाइलमा समावेश गरिएका सबै कागजातको एकचोटि फेरि मसिनोसँग दोहोर्‍याएर अध्ययन गर्दा पनि निर्णयमा कहीँ, कतै, कुनै खोट विसनकुमारले भेटेन । आफूले दिएको निर्णय सही रहेको र कसैलाई कुनै मर्का नपरेको बरु उल्टै विष्णु पुजनलाई न्याय नै भएको देखेर सन्तोषको लामो सास फेर्‍यो उसले ।
स्थानीय भाषामा उसको खासै दखल थिएन । त्यही भएर विजय बाबुकै मुखबाट विष्णु पुजनलाई भन्यो– ‘मैले तपाईंको फाइल दोहोर्‍याएर हेरेँ तर त्यसका कुनै गल्ती देखिँदैन त विष्णु पुजनजी ? तपाईंको मागबमोजिम नै निर्णय गरिदिएको छु । तपाईंको स्वामित्व लगतबाट हटाइदिएको छु । अर्को वर्षदेखि जग्गाको मालपोत र अरू दैदस्तुर तपाईंले तिरिरहन पर्दैन । निर्णय पक्का नै छ, कच्चा छैन ।
स्वामित्व काटिएको कुरा तपाईंको जग्गाधनी पुर्जामा मात्रै होइन, मोठमा समेत उल्लेख गरिएको छ । लगत कट्टा भएको छ । तपाईं ढुक्क भएर गए हुन्छ ।’ यसो भन्न लगाउनुभन्दा अगाडि आफैँले मोठ पनि भिडाएर हेरेका थियो उसले ।
‘नाइँ मालिक !’ भनेको सम्म बुझ्यो विसनकुमारले तर त्यसपछि गरिएका कुनै कुरा बुझेन । भनेको कुरा आफूले नबुझेपछि ख’र सा’बतिर फर्किएको विसनकुमारलाई विजय बाबुले ‘निर्णयमा गुनासो होइन, खुसी नै छु– नचाहिँदो दायित्वबाट मुक्त भएकोमा ।
बिनाहैरानी छिट्टै सबै काम गरिदिनुभो, त्यसका लागि पनि हाकिम सॉबसँग अनुगृहीत नै छु । यी सब कुरा त ठीकै छन् तर यति हुँदाहुँदै पनि काम कच्चा नै रह्यो । ल भन्नोस् त, कामै पक्का नगरी कसरी घर फर्किनु ? काम नै कच्चा भएपछि त जहिले पनि उल्टिने डर हुन्छ । हाकिम साहेब, तपाईं यहाँ हुञ्जेल त कसैले त्यसो नगर्लान् तर पछि आउने अरूको भर छैन’, नेपालीमा अनुवाद गरिदिए ।
भनाइको आशय विसनकुमारले बुझ्न सकेन । उसलाई राम्ररी थाहा छ– जहाँजहाँ सरूवा भएर गएको छ ऊ, त्यहाँत्यहाँ सेवाग्रहीलाई झन्झट, सास्ती र हैरानीबिना सेवा दिने सक्दो प्रयास गरेको छ ।
मिलेसम्म ऐनकानुनको व्याख्या र प्रयोग जहिले पनि सेवाग्राहीकै हितमा गरेको छ । प्रक्रियागत केही अड्चन देखापर्‍यो भने पनि विभागीय अनुज्ञा लिएर भए पनि सुधार गरेको छ । सरकारी राजश्वबाहेक अन्य कुनै दैदस्तुर भन्दै अनावश्यक रकम उसले असुली गरेको पनि थिएन र अरूलाई पनि त्यसो गर्न दिएको छैन । त्यस अड्डामा आएपछि पनि उसको त्यो कार्य तत्परता र लगनशीलतामा ह्रास आएको छैन ।
स्थानीय जनता र शासकीय सुधारका क्षेत्रमा लागिपरेका गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूको प्रशंसा नै बटुलेको छ । उत्कृष्ट काम गरेवापत विभिन्न सङ्घसंस्थाबाट प्रशंसापत्र, सम्मानपत्र र सरकारबाटै उत्कृष्ट कर्मचारीको पुरस्कार पाएको छ । त्यसैले जहाँ रहँदा पनि आफूले गरेका काममा आत्मसन्तुष्टि नै पाएको छ उसले ।
विष्णु पुजनका भनाइले निकै दुःखित भयो विसनकुमार अनि स्थानीय भाषा नजानेको र विष्णु पुजनलाई उसकै भाषामा बुझाउन नसकेकामा खिन्न पनि । सेवाग्राहीलाई सम्झाइबुझाइ गरेर पठाउने कर्तव्य उसकै हुन्थ्यो । त्यही भएर विष्णु बाबुमार्फत् नै ‘होइन विष्णु पुजनजी ! कानुनी हिसाबले नै तपाईंको काम पक्का भइसकेको छ ।
कानुनबमोजिम संलग्न राख्नुपर्ने सबै कागजात संलग्न राखेर नै निर्णय भएकाले म यहाँ भोलि नरहे पनि कसैले यो निर्णय उल्टाउन सक्दैन । त्यसैले कच्चा काम भयो भनेर त्यत्तिकै चिन्ता नगर्नोस् । काम साँच्चै पक्को भएको छ । नडराईकन घर जानुहोस् । ढुक्क हुनुहोस् । कसैले दुःख दिन सक्दैन तपाईंलाई’ भनेर सम्झाई हेर्‍यो ।
विजय बाबुले बोल्दाबोल्दै बीचैमा रोकेर विष्णु पुजनले मैथिलीमा भन्यो– ‘कानुनबमोजिम भएर मात्रै पुग्दैन हजुर, व्यवहार पनि मिल्नुपर्छ । हाम्रो काम गरिदिएर मात्रै हुँदैन । कुरा पनि मिल्नुपर्‍यो नि ! सबै थोक मिलाए मात्रै न काम पछिसम्म पक्को हुन्छ ।
समयमै राम्ररी मिलाउन जानिएन भने कानुनले पक्को गरेको काम पनि कच्चो नै रहन्छ र भोलि बदर हुनसक्छ हजुर ! त्यसो भए मुद्दा मामिलाको दलदलमा फसिन्छ । त्यही भएर भोलिसम्म पनि दुःख नपाउने गरेर आजै काम गर्न खोजेको हुँ । भएको कामले म मात्र होइन, सबै नै खुसी हुनुपर्‍यो । त्यसरी सन्तुष्ट पार्न सकियो भने न काम पक्को हुन्छ मालिक !’
पुरानो कामको सम्झना आयो र उसले ‘के छ विष्णु पुजनजी ? सञ्चै त हुनुहुन्छ होला नि, हैन त ? अचेल त हाम्रो अड्डातिर आउनु पनि हुन्न । मैले गरिदिएको कामबाट सन्तुष्ट हुनु त भयो होला नि ? कस्तो रहेछ काम, पक्का कि कच्चा ? थाहा भो होला नि अब त ?’ भनेर सोधिहाल्यो ।
विसनकुमारले ठ्याम्मै बुझेन विष्णु पुजनको भनाइको आशय । सम्झाउने कोसिसमा ‘कानुनले नै पक्का भएपछि कसैको केही लाग्दैन जी ! मैले त के पूरै सरकार नै बाङ्गियो भने पनि कसैको केही लाग्दैन । अब माथिको सरकारभन्दा ठूलो को छ, ल भन्नोस् त ? सरकारले नै बिगार्न नसक्ने भएपछि अरू कसले बिगार्ने तपाईंको काम ? तपाईं त ज्यादै कायर पो हुनुहुन्छ कि क्या हो ? व्यर्थैमा डराउनुहुँदो रै’छ । त्यसरी डराउनुपर्दैन । काम पक्का गरिदिएको छु भनेपछि त विश्वास गर्नाेस् न जी मेरो बोलीमा’ भन्यो ।
विसनकुमारको बोली विजय बाबुले उल्था गरेर मैथिलीमा सुनाइदियो । कुरा बुझ्यो तर एक डेग पनि पछाडि सरेन विष्णु पुजन । त्यसैले ‘भनेको त मान्नू न हौ विष्णु पुजनजी । सबै ठीक छ । व्यर्थैको जिद्दी नगर्नोस् । काम भयो ।
अब आरामसित घरतिर लाग्नोस् । हेर्नु न, मैले यति धेरै फाइल हेर्नु छ । ल भन्नोस् त, तपाईंसँग मात्रै अल्झेर बस्दा मैले यी फाइल कहिले सक्नु ? आजै सकिदिनुपर्छ, सकिएन भने अनाहकमा तपाईंका साथीभाइले दुःख पाउने छन् ।
म अरू फाइल हेर्छु । तपाईंको यो फाइल बरू फाँटमा लगेर सुब्बा सॉबलाई दिनोस् । लगत कट्टा भएको तपाईंको जग्गाधनी पूर्जा पनि नभुलीकन लिएर आजै जानुहोला । यताउता पर्न सक्छ’ भन्दै फाइल विष्णु पुजनकै हातमा दिई टेबुलमाथिको अरू फाइल तानेर अध्ययन गर्न थाल्यो विसनकुमार ।
अरूतिर ध्यान नदिईकनै करिब सात–आठवटा फाइल हेरेर उसले यसो टाउको उठाउँदा त विष्णु पुजन जहाँको त्यहीँ नै थियो । आश्चर्यचकित नै भयो विसनकुमार ।
‘छ्या ! कति साह्रो हो यो मान्छे ! काममा त्रुटि छैन भन्दा पनि डेग चल्दैन ।’ यस्तो सोच्दासोच्दै अनायासै मुखबाट ‘हन, अझै यतै हुनुहुन्छ तपाईं ? के भो फेरि ? त्यही कामको कुरा भए मैले पहिले नै भनिसकँे । सबै ठीक छ, निश्चिन्त हुनुहोस् । होइन, अर्थोकै भए ल भन्नुहोस्, अझै के गर्नुपर्‍यो मैले ?’ निस्किइहाल्यो ।
विसनकुमारले हेरिसकेका फाइल फिर्ता फाँटमा लिएर जानका लागि त्यहीँ बसिरहेका विजय बाबुले उसले भनेका कुरा मैथिलीमा उल्था गरिदियो विष्णु पुजनलाई ।
त्यसका कुराले विष्णु पुजनको अनुहारमा सन्तुष्टिको न कुनै चिह्न देखापर्‍यो, न त बाहिर जानै तयार भयो ।
‘के कुरा गर्ने ? कसरी सम्झाउने यस्ता अबुझलाई ? बुझ्न खोज्नेलाई पो सम्झाउनू । बुझ्नै नमान्नेलाई कसरी सम्झाउनू ? ज्यादै पो अपहत्तेमा परियो त बाबै !’ विसनकुमारले यस्तैयस्तै सोच्योे होला तर सेवाग्राहीलाई कहिल्यै तीतो नपोख्ने उसले भन्नचाहिँ केही भनेन ।
सेवाग्राहीलाई सम्झाउने, बुझाउने र सन्तुष्ट बनाएर पठाउने काम आफ्नो हो भन्ने सोच्यो विसनकुमारले । त्यसैले एकछिनपछि उसले भन्यो– ‘तपाईंले त बडो धर्मसङ्कटमा पो पार्नुभयो त विष्णु पुजनजी ? जे भन्दा पनि नमान्ने तपाईंलाई मैले कसरी सम्झाउने ? सबै काम ठीक भएको छ भन्दै छु । खै, पटक्कै पत्याउनुहुन्न ।
यस्तो कच्चा काम गरेर म घर जादिनँ बरू यतै भोक हड्ताल गर्छु भनेजस्तो गर्नुहुन्छ । मैले गरेको काममा खै कहाँ छ खोट ? म त भएजस्तो देख्दिनँ तर तपाईं भने मान्दै मान्नुहुन्न । पक्का कामलाई अझै कच्चा छ मात्रै भनिरहनुहुन्छ । कहाँ कच्चा भो, त्यो स्पष्टसँग गरे हुन्थ्यो । त्यसो पनि गर्नुहुन्न ।
तपाईंसँग मैले कच्चा काम गरिदिएको प्रमाण छैन भने मेरा कुरा पत्याउनोस् । घर जानोस् । मैले अघि नै भनिसकेँ– तपाईंसित मात्रै यसरी कुरा गरेर बस्ने भए यति धेरै काम छन् मैले कहिले सक्ने ? हेर्नोस् त त्यहाँ बाहिर तपाईं जस्ता सेवाग्राही कति छन् ? म तपाईंसँग मात्रै अल्झेको देख्दा कति गाली गर्दै होलान् ?’
विसनकुमारको पछिल्लो कुरा सुनेर पनि हलचल गरेन विष्णु पुजन । उसलाई आफ्नो अगाडिबाट हटाउने सुरले ‘मेरो कुरामा तपाईंलाई विश्वास लागेन भने ल भइगयो । तपाईं विजय बाबु ख’र सा’बसित अर्को कोठामा जानुहोस् ।
केमा र कहाँ तपाईंलाई शङ्का लागेको छ, त्यो स्पष्ट भनिदिनोस् । अझै पनि काम बिग्रिएको रहेछ, कहीँ कतै गडबड रहेछ भने म सुधारिदिऊँला’ भन्दै विजय बाबुतिर हेरेर ‘ल ख’र सा’ब तपाईं नै सभ्झाउनुहोस् त विष्णु पुजनजीलाई’ भनेर आदेश दियो विसनकुमारले ।
आफैँले सम्झाएर घर पठाउनू विष्णु पुजनलाई भनेको थियो विसनकुमारले । त्यसैले न विजय बाबुलाई केही भन्न सक्यो, न त अर्थोक केही गर्न नै सक्यो उसले । खिन्नताले भरिएको मन लिएर दिनभरि आफ्नो कार्यकक्षको भित्तातिर मात्रै हेरेर कामै नगरी बाँकी दिन कटाइदियो विसनकुमारले त्यस दिन ।
विजय बाबुको पछिपछि गएको विष्णु पुजन फेरि फर्केर विसनकुमारको कोठामा आएन । ऊ नफर्केपछि विजय बाबुले सम्झाएपछि चित्त बुझाएर नै गयो होला भन्ने सोच्यो र विष्णु पुजनको खोजी गरिरहन पनि आवश्यक ठानेन ।
त्यो दिन मात्रै होइन, त्यसपछि कहिल्यै पनि त्यो माल अड्डामा देखापरेन विष्णु पुजन ।
एक दिनको कुरा हो । प्रजिअ कार्यालयको बैठकमा जाँदा विसनकुमारले अकस्मात् विष्णु पुजनलाई त्यहाँ देख्यो । धेरै कचकच गरेर उसको कोठामा उभिएको मान्छे भएकैले होला विसनकुमारले चिनिहाल्यो ।
विसनकुमारले नेपालीमा नै भने पनि विष्णु पुजनले बुझेजस्तै गर्‍यो र मैथिलीमै भन्यो– ‘तपाईंले त कच्चै गरेको हो हजुर ! जति भन्दा पनि पक्का गर्न तयारै हुनुभएन । कानुनले मात्रै पक्को गरेर पुग्दैन मालिक हाम्रो जिल्लामा । कानुनका नौ सिङ ! एउटा भाँचिए अर्कोले घोच्छ ।
त्यसैले व्यवहारमा पनि पक्को गर्नुपर्छ । त्यतिबेला मेरो मनले कच्चा काम गरेर मालिकको अड्डाबाट निस्किन मानेन । कानुनबमोजिम आफ्नो काम भइसकेपछि त्यसलाई पक्का गर्ने दायित्व त मेरो पनि हो । त्यो दायित्व मैले पूरा गरिनँ भने मरेपछि भगवान्ले पनि छोड्दैन । त्यसैले काम कच्चै राखेर मरेपछि दुःख पाउने काम किन गरुँ म मालिक ? ल, मालिक नै भन्नुहोस् त हजुर ?’
विष्णु पुजनको कुरा सुनेर विसनकुमार झन् अलमलमा पर्‍यो । उसको त्यही अलमलका बीचमा फाइदा लिँदै विष्णु पुजनले थपिहाल्यो– ‘तपाईंले कच्चा छोडेको काम खरदार साहेब र सुब्बा साहेबले मिलेर पक्का गरिदिनुभो । त्यसपछि तपाईंकोमा मैले किन आइरहनुपर्‍यो त ? मेरो चित्त बुझ्यो, त्यसैले आइनँ । घरमा लठिभद्र काम छाडेर गएको थिएँ । कागज लिएर घर फर्किहालेँ– तपाईंलाई दुःख नदिईकन । काम पक्को भइसकेपछि हजुर जस्तो ठूलो हाकिमलाई किन हामीले दुःख दिइरहनुपर्‍यो ? भन्नोस् त मालिक ?’
त्यतिबेला त हतारै थियो विसनकुमारलाई पनि । त्यसैले उसले धेरै कुरा गरेन विष्णु पुजनसित । विष्णु पुजनसँग धेरैबेर कुरा नगरे पनि उसको मनमा भने यो विष्णु पुजनको चित्त कसरी बुझाइदिएछन् कर्मचारीले भनेर खुल्दुलीका रूपमा रही नै रह्यो ।
त्यहाँको बैठक सकेर कार्यालय पुगेपछि विजय बाबुलाई ‘त्यो विष्णु पुजन बूढो आज प्रजिअ कार्यालयमा भेटिएको थियो । तपाईंसित कुरा भएपछि उसको चित्त बुझेछ क्यारे ! खुसी नै देखिन्थ्यो । हन, कसरी त्यसको चित्त बुझाइदिनुभो तपाईंले ख’र सा’ब ?’ भनेर सोध्यो ।
विजय बाबुले ‘मोरो, त्यत्तिकै डराएको हजुर त्यो मान्छे । विना झन्झट काम गरिदिए यहाँ कसैले राम्रो काम गरिदिए हाकिमले भनेर पत्याउँदै पत्याउँदैनन् ।
केके भन्दैथ्यो, मैले ल ल हुन्छ भन्दै त्यसले भनेको मानिदिएँ । त्यसपछि खुसी भएर गयो त्यो । के गर्ने ? हजुरले सोचेर मात्रै हुँदैन हजुर, परिवर्तन गर्न समय लाग्छ’ भन्यो ।
जागिर खाएको त्यत्तिका वर्ष बितिसक्यो, विसनकुमारले विजय बाबुको भनाइको आशय नबुझ्ने कुरा थिएन । राम्ररी नै बुझ्यो होला ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, कात्तिक ३०, २०७६, ०७:००:००